STEAM: RAKOTRA FAMAKIANA DISO - STEAM - 2019
Famakiana famakiana disc on Steam
Androany, isika rehetra dia miankina tanteraka amin'ny Internet. Noho izany, raha manana Internet ianao amin'ny solosaina finday, fa tsy amin'ny gadget hafa (takelaka, smartphones, sns), dia azo alaina io olana io amin'ny fampiasana solosaina ho toy ny router Wi-Fi. Ary ny programa Switch Virtual Router dia hanampy antsika amin'izany.
Ny Switch Virtual Router dia fitaovana tsotra sy mahomby izay ahafahanao mizara ny Internet amin'ny solosaina finday na solosaina (afa-tsy amin'ny adapter Wi-Fi manokana) mampiasa Windows.
Manoro hevitra izahay mba hahita: Programa hafa ho an'ny fizarana Wi-Fi
Fanteno ny karazana fifandraisana Internet
Alohan'ny hanombohanao hiasa miaraka amin'ny programa dia tsy maintsy ampidirinao ny karazana fifandraisana amin'ny Internet izay mampifandray ny laptop amin'ny World Wide Web. Raha toa ka ampidirina amin'ny aterineto na mampiasa USB modem, dia tsidiho ny singa "Local Area Connection", raha toa ka Wi-Fi, dia araka izany, ilaina ny marika "Wireless Network Connection".
Manorata login sy tenimiafina
Mba hahafahan'ireo mpampiasa hahita haingana ny teboka, dia mila mandefa login mety ianao, izay tokony misy litera latinina, tarehimarika ary marika. Tokony hapetraka ny tenimiafina mba tsy ho afaka hampifandray ny tambajotra misy anao ny vahiny.
Raha vantany vao nesorina ny solosaina findainao dia hijanona ihany koa ny tamba-jotra virtoaly. Raha tianareo ny programa hamerina indray ny asany isaky ny manomboka Windows, dia tokony havadika ao anatin'ny fikandrana Switch Virtual Router ny safidy mifanaraka amin'izany.
Fomba tsotra hanombohana tambazotra tsy misy tambazotra
Ny programa dia manana varavarankely miasa tsotra, aorian'ilay faritra kely izay tsy maintsy ampidirinao fotsiny ny bokotra "Start" mba hahafahan'ny programa manomboka ny asany lehibe indrindra.
Tombontsoa amin'ny famindrana Virtual Router:
1. Ny aterineto tsotra indrindra miaraka amin'ny fanovana kely indrindra;
2. Asa miorina, miantoka ny fizarana ny tamba-jotra Wireless amin'ny gadget rehetra ilaina;
3. Ny fandaharana dia maimaim-poana.
Ny tsy fahampian'ny fifindrana Virtual Router:
1. Ny tsy fisian'ny fanohanana amin'ny serasera amin'ny fiteny Rosiana.
Raha mila fitaovana tsotra ahafahanao mametraka ny solosaina misy WiFi fiantohana router ianao, dia tsidiho ny programa Switch Virtual Router, izay mifanaraka tanteraka amin'ny fahafaha-manaon'ireo mpamorona.
Download Switch Virtual Router ho an'ny maimaim-poana
Raiso ny dikan-teny farany amin'ny fandaharana amin'ny tranonkala ofisialy
Virtual Router Plus Virtual router manager Virtual CloneDrive Virtual DJ
Zarao ao amin'ny tambajotra sosialy ny lahatsoratra:
Ny Switch Virtual Router dia fitaovana ahafahana manangana, manangana ary manomboka ny fidirana amin'ny tamba-jotra Wi-Fi amin'ny alàlan'ny ordinatera sy ny solosaina miaraka amin'ny modem-drafitra entina amidy.
Category: Program Reviews
Atsaharo ny fanamarinana ny mari-pankasitrahana an-tserasera
Layer mamelatra modes amin'ny Photoshop
Ahoana ny fomba hanaovana sary mihetsika ho an'ny horonantsary an-tserasera
Misafidiana vintana iray ho an'ilay processeur
Ho an'ny fampiasana mora kokoa ny fampiasana Microsoft Word, ny mpamorona an'io lahatsoratr'io lahatsoratra io dia nanome tranokala be dia be ary misy karazan-styles ho an'ny famolavolana azy ireo. Ireo mpampiasa izay tsy ampy ny habetsaham-bola amin'ny alàlan'ny paikady dia afaka mamorona tsy ny modely manokana ihany, fa koa ny endriny manokana. Read More
PCI VEN_8086 & DEV_1e3a - inona ity fitaovana ity ary aiza no haka ny mpamily ho an'ny Windows 7
Fantaro ny laharana serialin'ny solosaina finday
https://termotools.com mg.termotools.com © Steam 2019